By vijayafm on	 May 15, 2019 कोरोना अपडेट, फोटो फिचर, श्रीधर उपाध्याय
गँैडाकोट, १ जेठ । गैँडाकोट नगरपालिका क्षेत्र भित्र दुई वटा नमुना विद्यालय बन्ने भएका छन् । बुधबार दिउँसो नम्ुना विद्यालयका लागि प्रतिनिधि सभाका सांसद डा. शंशाक कोइरालाले भवन शिलन्यास गर्नुभएको छ । डा. शंशाक कोइरालाले गैँडाकोट ५ को जनक नमुना माध्यामिक विद्यालय र गैँडाकोट ६ को कालिका नमुना माध्यामिक विद्यालयको भवन शिलन्यास गर्नुभएको हो ।
नमुना माध्यामिक विद्यालय विकास बहुवर्षिय योजना अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा एक विद्यालयका लागि १ करोड ५० लाख रकम विनियोजन भएको छ । जसमध्ये ६५ प्रतिशत रकम भौतिक पूर्वाधार तर्फ र बाँकी ३५ प्रतिशत रकम शैक्षिक सुधारमा खर्च हुने कालिका माविका प्रधानाध्यापक प्रजानाथ कंडेलले बताउनुभयो ।
पहिलो तला सम्पन्न हुनका लागि १ करोड १७ लाख रुपैँया इन्जिनियरिङ इस्टिमेट रहेको गैँडाकोट नगरपालिकाका सहायक इन्जिनियर शंकर कंडेलले बताउनुभयो । कंडेलका अनुसार यस ३ तले भवनमा १२ वटा कोठामध्ये यस वर्ष पहिलो तलाका ४ कोठा तयार हुनेछन् । विनियोजित रकममध्ये ९७ लाख भौतिक पूर्वाधार तर्फ खर्च हुनेछ ।
ग्राउण्ड फ्लोरका लागि यस वर्ष रकम विनियोजन भएको हो । काँग्रेस चोक स्थित रहेको खेलमैदानमा जनक माविको नमुना विद्यालय निर्माण हुनेछ । जनकको भवन शिलन्यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मदनभक्त अधिकारीको अध्यक्षतामा भएको थियो । कालिका माध्यामिक विद्यालयको नमुना विद्यालयको भवन शिलन्यास विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
कोरोना महामारीमा काँग्रेस नवलपुर राज्यलाई सघाउँदै जनताको घर घर पुग्ने